Ikhaya » izithuba » Iindaba zeShishini lokuhlangana » UMBONO waseBrazil: IVietnam, iCambodia, iLaos neMyanmar zonyusa ukumelwa kwabantu baseAsia
Iindaba zokuhamba eBrazil • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zaseCambodia zokuhamba • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Iindaba zokuhamba eLaos • Icandelo lokuhlangana • Iindaba zeShishini lokuhlangana • Iindaba zokuhamba eMyanmar • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zokuhamba eVietnam
UMBONO waseBrazil: IVietnam, iCambodia, iLaos neMyanmar zonyusa ukumelwa kwabantu baseAsia
Umboniso wezoKhenketho kuZwelonke weGramado (FESTURIS) uyaqhubeka nokutyala imali kakhulu ekutsaleni indawo zamazwe aphesheya. IVietnam, iCambodia, iLaos neMyanmar ziphakathi kweendawo ezintsha zolu shicilelo, zandisa inxaxheba yaseAsia kulo msitho. Ubuhle bendalo kunye nembali kunye nelifa lenkcubeko kula mazwe mane ziya kuboniswa yi-Images Travel, eceba ukwandisa ishishini layo eBrazil naseLatin America.
“Izakuba lixesha lethu lokuqala eBrazil kwaye sikholelwa ekubeni ukuthatha inxaxheba kwiFesturis yeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana intengiso yaseBrazil kunye nokwazisa uphawu lwethu kweli lizwe. Imakethi yanda ngokukhawuleza eVietnam, eCambodia, eLaos naseMyanmar. Nangona kunjalo, siyaqaphela ukuba uninzi lweearhente zisebenza kunye nabaqhubi abakhulu bezokhenketho, ezingenakho ukubonelela ngeenkonzo eziguqukayo nezenzelwe umntu. Sinethemba lokuhlangabezana nale mfuno, ”iprojekthi ye-CEO yeeFoto zokuHamba, uTimo Bry.
Kwi-2018, iVietnam yafumana iindwendwe ezizizigidi ezili-15.4, ukonyuka ngama-20% kunonyaka ophelileyo. ICambodia neLaos nabo bandise amandla abo njengendawo yokufikela, befumana i-6.2 yezigidi kunye ne-3.8 yezigidi zabakhenkethi kunyaka ophelileyo, ngokwahlukeneyo. Ukhenketho lumele isabelo esibalulekileyo se-GDP yesizwe yala mazwe.
I-GVA ibonisa iyantlukwano kwiindawo ezintle nezithandwayo
Eyaziwa ngobunewunewu, ubuhle, imozulu yothando kunye neendawo ezintle, iMonaco iya kuba yenye yezinto ezinomtsalane zeSpace Space, ibonisa onke amandla ayo kwezokhenketho ngokukodwa kwimitshato. I-Seychelles, iJordani neNorway nazo ziqinisekisile ukuthatha inxaxheba kwi-FESTURIS, zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kwiNdawo eNtofontofo-indawo nganye enempawu zayo ezizodwa kunye nobuhle. Ezi ndawo zine ziya kuboniswa ngokuFikelela kuMbono weHlabathi.
“UFesturis ngumsitho oququzelelwe kakuhle kakhulu. Ndikuthanda kakhulu ukugxila kupapasho ngalunye, kusoloko kukho inkathalo enkulu ethathiweyo ukuzisa into entsha kubathathi-nxaxheba, zombini kumboniso nakwiingcali zokhenketho. Ngapha koko, umgangatho weearhente zokuhamba kunye nabaqhubi ubalasele kwaye sesinye sezizathu zokuba siye kulo mboniso kunye nabathengi bethu minyaka le. Enye into ebalaseleyo yiNdawo eNtofontofo, apho imbuyekezo ikhawuleza kuba abaxhasi babamba iintlanganiso esele zicwangcisiwe kunye nabathengi, utshilo umphathi weGlobal Vision Access uGisele Abrahão.
Iihotele zeHard Rock, iihotele zaseNobu kunye ne-Unico 2087 ziqinisekisiwe eFESTURIS
Ukomeleza iqela lababonisi eliqinisekisiweyo kwi-International Tourism Fair yaseGramado (FESTURIS), eyenzeka nge-7 ukuya kwi-10 ngo-Novemba ngo-2019, i-RCD yeehotele ityale imali kwakhona kumcimbi obonisa iiprojekthi ezibalaseleyo zokwamkela iindwendwe kumazwe aphesheya.
IiHard Rock Hotels Onke amava aBandakanyayo (iCancun, iLos Cabos, iPunta Kana, iRiviera Maya kunye neVallarta) ziya kubakho kwi-Wedding Space - icandelo lomtshato elikhethekileyo, enye yezona zikhula ngokukhawuleza kwimakethi yabakhenkethi. Iimpawu ezintathu ezingakumbi zaqinisekiswa ngeNdawo eNtofontofo- iNobu Hotel Miami Beach, Nobu Hotel Los Cabos kunye ne Unico 2087 Hotel Riviera Maya.
“Kuluyolo ukuqinisekisa ubukho bethu kwakhona kwiFesturis Gramado's Luxury Space kunye nokuthatha inxaxheba okokuqala kwiNdawo yoMtshato entsha. I-Festuris ilunge kakhulu kwaye sifumana le fomathi yokuhlela kunye neentlanganiso eziqinisekisiweyo neearhente ezigqwesileyo, ivelisa amathuba amaninzi, abafowunelwa kunye nentengiso, utshilo uMlawuli weeNtengiso zeRCD, uCarla Cecchele.